HORSE MIISAAN: MAXAAN UBAAHANAHAY, SIDA LOO DARYEELO (MAYDHIN, NADIIFIN, JARJAR, DHEJIN) - XOOLAHA
Horse Mane: Fursadaha iyo Daryeelka Ku Haboon
Muuqaalka muuqaalka faraska leh ee foornada leh ee hodanka ah ayaa soo jiidan kara qof kasta oo jacayl ah.
Si kastaba ha noqotee, dadka qaba fikir maskaxeed, waxay caadeysteen in ay ku fikiraan in dabeecada aysan cidna siinin sidaasi, inta badan ka fekeraan sababta faraskii la siiyey.
Aan eegno jawaabta su'aashan, sidoo kale waxaan ogaannaa sida si habboon loo daryeelo.
Muxuu farasku u shaqeeyaa?
Marka hore, timuhu waxay qabtaan hawlaha ilaalinta:
iyaga oo ruxaya, faraskiina wuu kaxeeyaa cayayaanka;
Timuhu waxay ka nuugaan dhididka;
xilliga qaboobaha, moosku wuu qadhqadhayaa qoorta;
oo kulaylku markuu hoos u ruxruxo ayuu timo jaraa,
inta lagu jiro roobab, maqaarka ayaa laga ilaaliyaa qoyaanka, taas oo timuhu ku leexiyaan.
Hawlaha kale ee timaha la qabadsiiyo waa hawlaha quruxda. Macaamiisha badan waxay bixiyaan dareen badan oo ku saabsan quruxda timaha ee jidhka xayawaanka la jecel yahay: waa la jarjaray, la dhaqay, qoyan, qashin leh wakiilada ilaalinta, lafdhabarta, iyo qaabeynta. Waxaad ku qancin kartaa natiijada shaqada noocaan ah muddo dheer.
Timaha sidoo kale waxay u adeegtaa sidii tilmaame caafimaad faras.
Dhibaatooyinka iyo cudurada waxay tilmaamayaan:
Joodarka timaha ee dareeraha ah - Tani waxay ka dhigan tahay in xayawaanku uu ku cadaadiyo dulin.
Timaha dhoobo - nafaqo aan lahayn.
Timuhu waxay ku dhacaan rucubyo - Cuncunka qoorta, natiijada farasku wuxuu ku riixaa oo ka soo bixiyaa, ama quudin aan habooneyn.
Dhibco furan - cudurka fungal suurto gal ah.
Mats - ha daryeeli xayawaanka, daryeelka liita wuxuu keeni karaa cudurro.
Ma taqaanaa? Rikoodhka dhererka miisaanka 5.5 m ayaa ku leh faraskii Kaliforniya lagu magacaabo Mawd.
Daryeel caafimaad oo habboon
Haddii aadan daryeeynin timaha, qaybaha isku dhafka ah ee wasakhda leh ee dhididka leh waxay sababi kartaa caro, farasku wuu badan doonaa, jidhkana wuu jeexi karaa dhiig. Kadibna timaha meeshan ayaa ku dhici doona, oo nasiibkana way diidi doonaan racfaan. Suufka dhoobada ah ee aan kuu ogolaan doonin inaad cayayaanka iska caabiso, fungus ayaa laga yaabaa inuu soo muuqdo. Nidaamka xanaanada ee mandaqadda qasabka ah waxaa ka mid ah maydhista iyo nadiifinta. Waxaad kaloo xannaaneyn kartaa ilaalinteeda iyo inaad isha ku hayso timo-jarista - samee styling iyo timo.
Si aad u dhaqdo
Xaaladaha caadiga ah, faras jilicsan ayaa timaha gashan doona bishiiba mar iyo tartanka ka hor, halka shaqaaluhu uu dhaqayo mar 2-dii toddobaadba mar. Si kastaba ha ahaatee, kuwani waa talooyin guud, waa lagama maarmaan in la kormeero sida ugu dhakhsaha badan ee timirta faras kasta si khaas ah u nadiifiso, waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay inaad marar badan ku dhaqdo.
Waxaad ku dhaqi kartaa mashiinka shaambo gaar ah oo loogu talagalay fardaha, ama saabuunta dharka. Waxaad isticmaali kartaa burush ama gacmo si aad u dhaqdo. Biyaha waa la qaboojiyaa waxayna ku shubaan tuubo ama baaldi, isku dayaya in aysan galin dhegaha. Waxay dhacdaa in timaha maadada uu noqdo casaan huruud ah, ka dibna waxaad u baahan tahay inaad soo iibsato shaambo madow.
Waa muhiim! Xayawaanka xoolaha ee xayawaanka aan ku habboonayn, maadaama ay qalajin karto maqaarka.
Ka dib markii aad dhaqday timo si fiican ayaa loo dhaqaa, sida hadhaaga qashinka xabsiyada ayaa ka xanaajin kara maqaarka faraska. Si aad u iftiiso biyaha, taas oo la raaciyo, ku dar milix, waxay noqon doontaa 100-150 g oo baaldi biyo ah. Ka dib marka aad qubeysid, nuuca waa in la jaraa. Wixii badbaadin iyo iftiin caafimaad qaba, timaha waxaa lagu daaweeyaa qufac, waxaa lagu dhajiyay dhowr dhibcood oo ah qalabka koolada, burcad barkeed, baalal boodh ama saliid shaaha oo ku faafaya burush. Xasuuso in ka dib markii shuruudaha timuhu aysan xanuujin doonin, xajinta timaha.
Xilliga jiilaalka iyo inta lagu jiro xilliga molting, farasku ma maydhin, haddii kale waxay qabsan kartaa qabow. Taa baddalkeeda, mashiinka waxaa lagu buufin karaa hawo qaboojin iyo isku dhafan. Haddii ay dhacdo cufan culus, waxaad ku rusheyn kartaa maryaha biyo kulul leh shaamboo, tuujin biyaha oo timaha ku xoqdo, ka dibna tirtir oo dabool ilaa inta dharka maro.
Waxay noqon doontaa mid waxtar kuu leh inaad ku barato fiyuuska farasiga ah, iyo sidoo kale inaad barato qaabdhismeedka iyo farsameynta dabada faras.
Nadiifinta mashiinka waa ineey dhacdaa maalin kasta. Ka hor intaan qalliinka lagu samayn, waxay kormeeraan, qaadaan qashinka gacanta, toosi maryaha. Gacmaha waxaa loo qaybiyaa dhinacyada oo dhan iyaga oo si gooni ah u daboolaya shanlo, isla markaaba maqaarka maqaarka. Waxaad u baahan tahay inaad ka guurto talooyinka ilaa xididada, si tartiib tartiib ah u furfuran, ka dibna dhererka oo dhan.
Shuruudaha aasaasiga ah ee darajada:
farqiga weyn ee u dhexeeya ilkaha;
talooyin caajis ah;
wax - caag ama alwaax, laakiin maaha biraha;
godka waa in aan la jiidin.
Marka ay shanladu bilaabanto si fudud u gudubto timaha, bilow buraashka dabiiciga ah.
Timaha faraska waxaa la gooyaa ama la gooyaa, ka dibna waxay u muuqan doontaa qurux badan.
Sidee loo dhajiyaa fardaha fardaha
Inta badan, timaha farasku waa la gooyaa marka ay dhuuban tahay, mararka qaarkood waxay timaadaa timaha ama waxay sameeyaan timo shucaac ah "sida budada." Guntinta dharka, ka dibna timo dhaqday oo la qalajiyey. Si qoorta faraska ah looma barafoobin, samee timo dheer ka hor bilawga cimilada qabow.
Ma taqaanaa? Fardaha qoyan waxay sameeyaan timo, nibbling on kasta oo kale.
Sidee loo qariyaa
Ka hor intaadan xijaabin qoryaha, waxaad dalban kartaa jel gaar ah timahaaga si aad u sahlanaato inaad meel dhigato. Ku labiso dhar qoryaha leh ama xariijin.
Waxaa jira siyaabaha noocan oo kale ah:
Western Style - Foornada waxaa loo qaybiyaa qaybo yaryar oo ay ku xiran yihiin xirmooyinka kabaha. Xirmiyaha xiga waxay ku xidhan yihiin dhererka oo dhan isla isla mid ah.
Doofaarka qoryaha - timo ayaa loo kala qaybiyaa dhinacyada si ay lambarkoodu u kala duwanyihiin 3. Dhamaan sadexda nooc ee istiraatiijiga ah, waxay ku xirtaan jilicsanaan, kuwaas oo dhinacyada isgoysyadu ku dhexjiraan gudaha. Dhammaadkii cajaladda ayaa lagu qarsoomay.
Doofaarada Continental - Timuhu waxay u kala qaybsan yihiin xargaha oo waxay ku xiran yihiin koox adag. Waqtiyada joogtada ah, qeybaha xuduudaha ku xiga waxay ku xiran yihiin xargaha qaybta dhererka dhererka oo dhan si ay u sameeyaan shabaqa.
Mid ka mid ah pigtail weynmarka walxaha laga sameeyo madaxa ilaa jidhka, si tartiib tartiib tartiib ah udhaca dhinacyada hoose.
Waxa kale oo aad timahaaga ku dhejin kartaa qoryaha habeenkii ka dib marka aad qubeysid, ka dibna subaxdii, ka dib markaad foorarsato xumbada, waxay noqon doonaan waraab.
Waa muhiim! Sidaa daraadeed in aan la saarin, waa la hubiyaa maalin walba, waxaa la shaqeynayaa hal mar toddobaadkii, qoortana waxaa lagu daaweeyaa qalab khaas ah oo ka ilaaliya qaniinyada fardaha kale.
Sidaa darteed, faraslaha ma aha qurux uun, laakiin sidoo kale caafimaadka iyo ilaalinta. Si ay u qabato dhammaan hawlahaas, waa in la dhaqaa lana nadiifiyaa. Wixii faahfaahin dheeraad ah, fardaha waa la gooyaa oo qaabeeya.